ABafundi beBhayibhile, ngeye-1870
IMboniselo yokuqala, ngowe-1879
IBhayibhile yaprofeta yathi emva kokufa kukaKristu, phakathi kwamaKristu okuqala kwakuya kuvela abafundisi bobuxoki, kwaye babeya kuyingxenga imfundiso eyinyaniso yeBhayibhile. (IZenzo 20:29, 30) Ekuhambeni kwexesha kwenzeka kanye loo nto. Baxuba iimfundiso zikaYesu nezobuhedeni, aqalisa ukuvela amaKristu obuxoki. (2 Timoti 4:3, 4) Sinokuqiniseka njani ukuba namhlanje sikuqonda ngokwenene oko kufundiswa yiBhayibhile?
Kwafika ixesha lokuba uYehova ayityhile inyaniso. Waprofeta wathi, ‘ngexesha lesiphelo ulwazi lokwenyaniso luya kuba luninzi.’ (Daniyeli 12:4) Ngowe-1870, iqaqobana labantu ababefuna inyaniso laqonda ukuba iicawa ezininzi zifundisa izinto ezingekhoyo eZibhalweni. Ngoko ke, laqalisa ukufuna ukwazi ezona mfundiso zeBhayibhile, waza uYehova walinceda lazazi kakuhle izibhalo.
Amadoda anyanisekileyo ayifundisisa ngenyameko iBhayibhile. Abo Bafundi beBhayibhile banyanisekileyo baqalisa indlela yokufundisisa esiyisebenzisayo nanamhlanje. Baxubusha imfundiso yeBhayibhile nganye. Xa kukho umbandela weBhayibhile abangawuqondiyo, babekhangela ezinye iindinyana eziwucacisayo. Xa befikelela kwisigqibo esivisisana nazo zonke iZibhalo, babesibhala phantsi. Ngenxa yokuvumela ingcaciso yeBhayibhile, bafumana inyaniso ngegama likaThixo noBukumkani, injongo yakhe ngoluntu nomhlaba, imeko yabafi kunye nethemba lovuko. Uphando abalwenzayo lwabakhulula kwiimfundiso nezenzo ezininzi zobuxoki.—Yohane 8:31, 32.
Ngowe-1879 aBafundi beBhayibhile baqonda ukuba lifikile ixesha lokwazisa bonke abantu inyaniso. Ngaloo nyaka baqalisa ukuprinta iphephancwadi elisahanjiswayo nanamhlanje, IMboniselo Evakalisa UBukumkani BukaYehova. Sithethanje sixelela abantu abakumazwe angama-240 abathetha iilwimi ezingaphezu kwama-750 ngenyaniso yeBhayibhile. Ulwazi lokwenyaniso luye lwasasazeka ngakumbi kunangaphambili!
Yintoni eyenzeka kwinyaniso yeBhayibhile emva kokufa kukaKristu?
Yintoni eye yasinceda sayifumana inyaniso yeLizwi likaThixo?